‘आधारभूत आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिएका छौं’ – Dainik Lumbini
बुटवल उप–महानगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो वडा नम्बर ११ आर्थिक, सामाजिक , साँस्कृतिक विभिन्न हिसाबबाट विविधताले भरिएको वडा हो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँका वडाबासी पनि निकै उत्साहित र आशावादी भएका थिए । अब कामको समीक्षाको समयमा साँच्चै नै वडाबासीले अपेक्षा गरेअनुरुप र चुनावका समयमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरुप काम भए त ? यसै सन्दर्भमा रहेर वडा अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः संं.
कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीले जुन प्रतिबद्धता गरेका थियौँ तीमध्ये धेरै प्रतिबद्धता पूरा गरेका छौं र प्रतिबद्धता नगरेका धेरै काम पनि गरेका छौं । दुई तिनाउ र दानव नदीले काटेर तीन तिर विभाजित भएकाले यस वडामा वारि र पारि भन्ने चलन थियो । यसलाई एक बनाउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता थियो । अहिले संघीय सरकारको सहकार्यमा पूरा भएको छ । अहिले तिनाउमा २ वटा र दानवमा २ वटा गरी ४ वटा पुल निर्माण भएका छन् । यसले वडालाई एउटै बनाएको छ । सुगम र सजिलो बनाएको छ । सुरुका दिनमा प्रतिबद्धता पत्र लिएर घर–घरमा जाँदा सडक खाल्टा खुल्टी भएर हिंड्नै नमिल्ने थिए । सुरुकै वर्षमा १ करोड २९ लाख खर्च गरेर ग्राभेल गरी मानिस हिंड्न मिल्ने गराएका थियौं । त्यसपछि वार्षिक ४० वटा सडक पिच भएका छन् । ८० प्रतिशतसम्म जनसहभागिता जुटाएर भए पनि काम भएको छ । ६० वटा टोल विकास संस्था छन्, तिनै टोल विकासबाट आएका कुरा नै योजनामा पठाउने हो । त्यसैले कुनै पनि टोल, कुनै पनि छेउ, कुनै पनि ठाउँमा विकास पुगेन भनेर भन्ने अवस्था छैन् । सुरुमा बाटो, पानी र विद्युत्मा धेरै समस्या रहेको थियो । यस वडामा १३ वटा सामुदायिक खानेपानी छन् । ६ वटा ओभरहेड पानी ट्यांकी निर्माणकै क्रममा छन् । अहिले विद्युत्, खानेपानी र सडकमा समस्या छैन । यसरी हेर्दा हामीले करिब ९८ प्रतिशत गरेका प्रतिबद्धता पूरा भएका छन् । त्यस्तै ठूला सडकअन्तर्गत शान्ति पथ, कालिका पथ, होराइजन पथ, देवी पथ, रंगशाला मार्ग र बेलबास–बेथरी सडक, मगरघाट जाने बाटोलगायतका सडक निमार्णलाई हामीले जोड दिएका छौँ । केही सडक बनिसकेका छन् भने केहीको निर्माण कार्य भैरहेको छ । वडा नं. ११ विविधताले भरिएको छ, निम्न आयदेखि अति उच्च आय भएका व्यक्ति यहाँ हुनुहुन्छ । वडाले गर्नुपर्ने काम छिटो छरितो रुपमा गर्दै आइराखेका छौं । अहिले वडाबासीहरुको आफ्नै फरक आवश्यकता रहेका छन् तर बजेटको कारण हामीले आधारभूत आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिएका छौं ।
पूरा हुन नसकेका काम के–के छन् ?
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका कुरा र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य पूरा हुन सकेन । नाप जाँचका काम भैसकेका थिए । संघीय सरकारबाट आयोग विघटन भएपछि त्यो योजना अँधुरो रह्यो । यो विषयलाई नै धेरै समय, मेहनत, बजेट लगाएको भए पनि जुन इच्छा थियो त्यो पूरा भएन ।
तिनै तहको समन्वय कस्तो रह्यो ?
हामीले तीनै तहका सरकारसँग राम्रो समन्वयन गर्न सक्यौं । देवी पथ, कालिक पथलगायतका ठुला सडक बनाउने काम अहिले चलिरहेको छ । सडक बनाउने क्रममा कोही घरबारविहीन भए मुवाब्जा दिने निर्णय पनि भएको छ । टेन्डर प्रक्रियाले गर्दा केही ढिलो भएको हो ।
बुटवलको सबैभन्दा ठूलो वडामा बसेर काम गर्दाका समस्या के रहे ?
यहाँ सेवा ग्राहीहरुको घुइँचो लाग्ने गर्दा काम गर्दा गर्दै पनि समय लाग्ने हुन्छ । करिब ६०० भन्दा बढी सडक मात्रै छन्, ६० ओटा टोल विकास संस्था छन् । सबै काम गर्न थोरै रकमले नसकिने भएकाले वडाबासीहरुलाई धेरै आर्थिक सहभागिता पनि गराउन प¥यो । यसो हुँदा अरु ठाउँमा भन्दा फरक भयो भनेर गुनासो पनि आयो । केही सडक बनाउँदा धेरै जग्गाको विवाद पनि आए, एउटै काम गर्न २ वर्ष लाग्यो । तिनाउ र दानव नदी करिडोर बनाउने काम सुरु भैसकेको छ, यसलाई छिटो सम्पन्न गर्नुछ । बजेट भएर पनि काम छिटो छिटो हुन सकेको छैन ।
मैले कुनै सेवा दिने काम वडा बासीलाई छिटो छरितो, समस्यामा नपारिकन कागज पत्र कै आधारमा बराबरी रुपमा र आफूलाई सामाजिक, आर्थिक रुपमा आँच नआउने किसिमबाट गरेको छु । यो विषय जनताले पनि मूल्यांकन गर्नु भएको छ होला । यदी कही कतै कमजोरी देख्नु भएको छ भने मलाई सुझाब तथा प्रतिकृया दिन अनुरोध गर्दछु ।